polygamy နှင့် တစ်လင်တစ်မယား စနစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » polygamy နှင့် တစ်လင်တစ်မယား စနစ်
Posted by Ma Ma on Jul 18, 2011 in Creative Writing, Think Different | 21 comments
စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
ကြာဖူးနားဝနဲ့ တွေးကြည့်တာနဲ့တင် polygamy စနစ်ကို မကြိုက်နှစ်သက်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်မို့ သဘောကွဲလွဲတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။
ဖြစ်လာတဲ့လူတွေကိုတော့ (သဂျီးဝါဒနဲ့ မကိုက်ညီပေမယ့်) ကံလို့ပဲပြောရမလား၊ ဝဋ်ကြွေးလို့ပဲ ဆိုရလေမလား မသိတော့ပါဘူး။ (၃-၄ယောက်ယူပြီး အဆင်ပြေနေကြသူမပါ။)
မိရင်းဖရင်း မောင်နှမအရင်းတွေကြားမှာလည်း ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ကြီးတဲ့အမှုကို ငယ်စေ၊ ငယ်တဲ့အမှုကို ပပျောက်စေဆိုသလို ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ သွေးဟာ ရေထက် စေးပျစ်တယ် ဆိုသလိုပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီကြားထဲမှာ မိကွဲ ဖကွဲ တွေဖြစ်နေရင်တော့ သေးတဲ့အမှုဟာ ကြီးလာရပါတော့တယ်။
အိမ်ထောင်နှစ်ခုရှိတဲ့ မိသားစုမှာ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ မောင်နှမအချင်းချင်း ကိစ္စတွေဟာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးတတ်ပါတယ်။
မိခင်ဆိုတာ သားသမီးကို ချစ်ရိုးထုံးစံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမေဆိုတာ ငယ်တဲ့သားသမီးကို ပိုဂရုစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ညီအစ်မအရင်းဆိုရင် ပြဿနာ မရှိပေမယ့် အမေတူ အဖေကွဲ အစ်မတစ်ယောက်ဟာ အမေကသူ့ညီမကို ပွေ့ချီချော့မြူနေတာကို မြင်ရတဲ့အခါ အမေက ငါ့ကိုတော့ မချစ်ဘူး။ သူ့နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ ရတာကိုပဲ ချစ်တယ်ဆိုပြီး စိတ်အနာတရ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အဖေတူ အမေကွဲ မောင်နှမတွေမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ အဖေက သားသမီးတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ လိုအပ်သလို ဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုပဲ သူ့တော့အသာပေးတယ်။ ငါတော့နစ်နာတယ်ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတင် အဖေအမေကို မုန်းတယ်လို့ ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဟင်္သာတက မောင်ထိပ်ကွက်လို အဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေမှာ polygamy ကို ပြသနာရဲ့ အရင်းအမြစ်လို့တောင် ပြောချင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ အဆင်မပြေတတ်တဲ့ လူ့ကန့်လန့်၊ လူ့ဂွစာတွေဟာ အဲဒီလို မိဘတွေက မွေးဖွားလာတဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
“မိဘက သားသမီးကို ချစ်သလို သားသမီးက မိဘကို ချစ်လျှင် နတ်ပြည်ကျဉ်းလတံ့” လို့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ စကားပုံတစ်ခုကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။
ဒီစကားပုံထဲကလို အိမ်ထောင်တစ်ခုပဲ ထူထောင်ထားသူ မိဘတွေကိုတောင် သားသမီးတွေက အပြည့်အဝ ပြန်မဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ကြပါဘူး။ အိမ်ထောင်ကွဲရှိတဲ့ မိဘဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးတော့တာပေ့ါ။
သားကြီးသမီးကြီးကလည်း မပြုစုချင်၊ သားငယ်သမီးငယ်ကလည်း ငြိုငြင်နဲ့ မိခင်ဖခင်အရင်းပေမယ့် ကိုယ့်အရိုး ကိုယ်မနိုင်တဲ့အရွယ်မှာ သားသမီးထံမှာ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ နေထိုင်စားသောက်ရတာတွေကိုလည်း မြင်ဖူးပါတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် (ကွန်ဆာဗေးတစ်လို့ပဲပြောပြော) ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ့်မိဘ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ့်တူသားတွေကိုသော်လည်းကောင်း၊ polygamy မဖြစ်စေလိုပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာလူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုပြီး ရှေ့တန်းကပြေးနေတဲ့ အမေရိကန်လို နိုင်ငံမှာတောင် သမ္မတအရွေးခံမယ့်သူဟာ တစ်လင်တစ်မယားရှိသူပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ (ဟုတ်မဟုတ်တော့ အမေရိကန်က လူတွေ ပိုသိမှာပါ။)
polygamy ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကိုတော့ မသိလို့ ထည့်မရေးလိုက်နိုင်ပါဘူး။
သိသူများ ဝိုင်းဝန်းဖြည့်စွက် ပေးကြရင်တော့ ပိုကောင်းသွားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
မိန်းမတစ်ယောက်ယူပြီး သမ္မတ ဖြစ်အောင် နေတော.မယ် ဟီးးးးးးးးးးးး
အံမလေးဗျာ…။ polygamy ဆိုလို့ အဘိဓါန်ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်..။ ဘာကြီးလဲလို့…….
English : polygamy
Myanmar : တဈခြိနျတညျးမယားတဈယောကျမကယူသောဓလေ့။ မယားပွိုငျယူဓလေ့။
တစ်ချိန်ထဲ မယားတစ်ယောက်ထက်မက ယူသောဓလေ့ ။ မယားပြိုငါယူသောဓလေ့ ။ တဲ့…။ ကောင်းတာပေါ့…………..
I also don’t like polygamy. But, I just want to add some information.
” မိဘတွေ ကိုတောင် သားသမီးတွေက အပြည့်အဝ ပြန်မဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ကြပါဘူး ”
In foreign country, generally, government take all responsibilities for their citizen
( in Australia, not only citizen, all of the people who “legally” stay in their country,
even foreigner with permanent resident status ).
In fact, သားသမီး don’t need to take care ( ဂရုစိုက် ) to their မိဘ.
( on the other hand, မိဘ don’t need to take care ( ဂရုစိုက် ) to their သားသမီး,
if they don’t want to )
Their idea is, all မိဘ & သားသမီး are human live in Australia &
government has the responsibility to take care ( ဂရုစိုက် ) all human in their country.
Government give full support to every senior citizen ( မိဘ ).
( house, food, cloth, car, money, healthcare, entertainment, TV, VDO, everything )
If they ( မိဘ ) cannot do their daily chores အိမ် အလုပ်.
( because they are too old or medically unfit )
The government will hireacarer/nurse for this senior citizen ( မိဘ ).
( this carer/nurse will do all အိမ် အလုပ်, cooking, cleaning, shopping, bathing,
even they ( မိဘ ) don’t need to clean their shit/faeces, this carer/nurse will do ).
Finally, ( မိဘ ) don’t need to depend on သားသမီး &
some ( မိဘ ) do not allow ( their သားသမီး ) to do/help their work.
Because, they ( မိဘ ) want to show they are strong, independent &
they also want to protect their privacy.
They don’t need to feel ( သားသမီးထံမှာ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ နေထိုင်စားသောက် ).
The only thing မိဘ will appreciate from သားသမီး is sentimental value.
This is their life style & their social security system.
Dear Foreign Resident ,
It is not something to do with this post but your comment amazes me more curiosity to observe about social security system(SSS) for migrant workers in Australia . Surely , the system we can learn in web and / or books . However , it is more beneficial to learn from those who lives in that country . I really appreciate and request to know from you distribute your knowledge of SSS for migrant workers if you have some spare time to do so . I am longing to see your valuable discussion Sir . Thank in advance .
Dear Shwe Ni,
I know onlyalittle about their SSS.
1. you must be arrived legally.
2. you must have resident status (PR or TR) ( not student ).
3. Then, you are entitle for Medi Care Scheme,
you can have basic medical service free or nearly free.
( Example, see the doctor, make blood test, medical check up are free
& you can also getamedicines free or very cheap price =5$ )
4. Initial2years, Centre Link will not provide money to you.
5. After2years, if you don’t haveajob & you are poor,
they will start giving you around 900 A$/month ( basic ).
5. If you don’t haveahouse to stay, they will give youahouse/apartment
( but this is not your own & you cannot sold it back again )
6. If you want to learn, you can learn with very cheap price
( Example, 100 $ for the whole academic year in TAFE,
TAFE is equivalent to our GTI or college )
7. If you are not satisfy & want to learn in good University,
they will lend money for your education fees.
( you will need to pay back after you getagood salary eg, 3000 $/month,
if your salary is less than 3000 $/month you don’t need to pay back )
8. If you don’t haveajob yet, they will give you concession card,
your transport charge are 1/2 price, medicines are not more than5$.
9. If you are more than 65 & poor, whether you have worked in AU or not,
you can have pension ( 1500 $/month )
10. If you want to bornachild, government will pay 5000 $ per each child.
11. Government public school is free of charge for your children.
12. They even pay for your child care fees.
13. If you become disable ( because of old or accident )
gov will hireacarer/nurse for you.
Those are the basic rights and there werealot of more possibilities.
If you are smart & know about the laws properly,
you can havealot money more.
( example, TV, VDO & etc )
Some of them even bully the system.
( Example, If you havealittle pain in your leg & if you are jobless & poor, then you call an ambulance to go to clinic, as you don’t need to pay it, gov will pay it for you )
I saw, one refugee ( 22 year old, from Myanmar, jobless ) boughtabrand new car ( Toyota RAV4 ) from this money. Their whole family do not need to work, but they can even give money back to their relatives in Myanmar ( 200000 Kyats every month ).
Some refugees don’t work & they just drink alcohol & eat fried chicken in their whole life in AU.
ဦးဘချစ် ရဲ့ ချစ်ဒုက္ခ ကို သိလား ။
ရည်းစား နှစ်ယောက် လောက် ထားပါ အတော်ပဲ ( ဘိုဘိုဟန့်သီချင်း )
တခြားတော့ မသိဘူး ငယ်ငယ်ကတည်းက မိဘတွေ ကွဲပြီး မိဘမဲ့ ဘ၀ နဲ့ ရုန်းကန် နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ရှိတယ် သူရဲ့ အမူအကျင့် အနေအထားက သူများနဲ့ မတူဘူး။ မြိုသိပ်မှုများတယ် တုန့်ပြန်မှုနည်းတယ်။ တုန့်ပြန်တဲ့ အခါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန်တတ်တယ်။ သူလို လူမျိုးကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ထိန်းချုပ်နိုင်မှ အဆင်ပြေမဲ့ လူစားမျိုး.. မေတ္တာငတ်တဲ့ လူ လို့ ထင်မိတယ်။
ရှေးယခင်ကတည်းကပဲ မိန်းမတွေထက် ယောက်ျားတွေက အခွင့်အရေးပိုယူခဲ့ကြတာ။
အဲဒါတွေ လက်ရှိဥပဒေတွေ ဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့ ညီညွတ်စေဦးတော့ တရားမျှတမှု့မရှိတာတော့ ထင်ရှားပါတယ်။
ပထမဥပမာက အစ္စလမ်ထုံးတမ်းဓလေ့ အချို့…။ ယောက်ျားက ဇနီးလေးယောက် တရားဝင်ယူနိုင်တဲ့အပြင် အခြားမိန်းမတွေနဲ့လဲ ကာမဆက်ဆံနိုင်တယ်။ ဇနီးကတော့ မိမိယောက်ျားမှအပ အခြားတယောက်နဲ့ တကြိမ် ဖေါက်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရရုံနဲ့ သူ့ဖခင် အကို မောင်ဘွား ဆွေမျိုးများကဦးဆောင်ပြီး လူမြင်ကွင်းမှာ ခဲနဲ့ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ် အပြစ်ပေးရတာမျိုး…။
ဒုတိယဥပမာက လက်ရှိ မြန်မာ့ ဥပဒေ။ ယောက်ျားက မယားပြိုင် (များစွာ) ယူခွင့်ရှိပြီး ဇနီးကတော့ အခြားအမျိုးသားတယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု့ တကြိမ်လုပ်ရုံနဲ့ ယောက်ျားက စွန့်ပစ်ကွာရှင်းခွင့်ရှိတာ။ ဆက်ဆံမိတဲ့ အမျိုးသားကတော့ မယားခိုးမှု့ လို့ဆိုပါတယ်။
ဓလေ့တွေ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ၊ ဥပဒေတွေက တရားမျှတမှု့ကိုမပေးဘူးဆိုရင် –
ကိုယ့်ဇနီးအပေါ် ကိုယ်က တရားမျှတမှု့ကိုပေးဘို့ မကောင်းဘူးလား?
ကိုယ့်သားသမီးအပေါ် ကိုယ်က တရားမျှတမှု့ကို ပေးဘို့ မကောင်းဘူးလား?
Great comment !!! Appreciate it !!!
ကိုယ့်ဇနီးအပေါ် ကိုယ်က တရားမျှတမှု့ကိုပေးဘို့ မကောင်းဘူးလား?
ကိုယ့်သားသမီးအပေါ် ကိုယ်က တရားမျှတမှု့ကို ပေးဘို့ မကောင်းဘူးလား?
မိန်းမတယောက်ပဲယူထားမယ်ဆိုရင်… ကိုယ့်ဇနီးအပေါ် ကိုယ်က တရားမျှတမှု့ကိုပေးနေတယ်လို့ ထင်နေတာလားဟင်င်င်…။
မွတ်စလင်မိတ်ဆွေတွေ မေးကြည့်တော့… ဇနီးတွေကိုယ်နှိုက်ကိုက.. ၃-၄ယောက်.. မယားညီအမတွေလို နေချင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်..။ မလေးရှားသွားတဲ့ ဂျပန်မိတ်ဆွေတယောက်များ… မလေးမလေးတယောက်ကြိုက်လို့… တွဲယုံရှိသေး.. ဟိုက..သူငယ်ချင်းပါခေါ်ခေါ်လာတယ်..။
အဲဒါ.. သူ့ကိုယူမယ်ဆိုရင်..စဉ်းစားပေးဖို့ နောက်တယောက်ဖြစ်ပါသတဲ့..။ အဲဒီသူငယ်ချင်းက..သူနဲ့..အိပ်ယာထဲမှာအဆင်ပြေမှာပါတဲ့..။
ကျုပ်ကတော့.. ကာယကံရှင်တွေက သဘောတူလက်ခံရင်.. ကောင်းတယ်..တရားမျှတတယ်ထင်တာပါပဲ..။
အစိုးရအနေနဲ့ကတော့… ပေ၃သောင်းအမြင့်ကကြည့်ရတာမို့ … တမျိုးပေါ့…။
တကယ်တော့.. ဖိုနဲ့မ..လက်ထပ်စနစ်တွေက… ယဉ်ကျေးမှု..နိုင်ငံရေးတွေနဲ့တူတူ..မြစ်ရေလို..စီးဆင်း ပြောင်းနေတာမျိူးပါ..။
ယူအက်စ်က..(သာမန်အားဖြင့် ဥပဒေအရ) တလင်တမယားစံနစ်ဖြစ်ပါတယ်…။
အဲဒါကြောင့် သမ္မတအရွေးခံမယ့်သူဟာ တစ်လင်တစ်မယားရှိသူပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်ထားဖို့မလိုပါဘူး..။
စံနစ်အရ… မိန်းမ၂ယောက်.. ယောက်ျား၂ယောက် ..စသဖြင့်..အပြိုင်လက်ထပ်ထားလို့မရပါဘူး..။
ကွာရင်လည်း… ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ (သာမန်အားဖြင့်) တ၀က်ခွဲရပါတယ်..။ ကလေးရှိနေရင်.. ကလေးစားရိတ် ခွဲထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်..။
Marvellous Kai !!!
Whatacritical thinking !!!
It is good to give your wifeafair go
( I mean, give herachance to choose
whether she want to use it “alone” or share it with other )
But, it seems, my wife doesn’t want to share it.
“ကာယကံရှင်တွေက သဘောတူလက်ခံရင်.. တရားမျှတတယ်ထင်တာပါပဲ”
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ… မရှယ်ချင်ဘူး.. ဝေမစားနိုင်ဘူးချည်းပဲလှိမ့်ပြောနေချင်ကြတာ…
မြန်မာ့ဥပဒေအရ .တရားဝင်ဖြစ်နေတာကို…. ပြုတ်အောင်ချရမယ်.. ဥပဒေပြင်ရမယ်လို့… ဘယ်သူကမှ အသံမထွက်လာဘူး..။ လက်တွေ့ကျကျလုပ်တာလည်း မကြားဖူးဘူး..။
အမျိုးသမီးကာယကံရှင်တွေက.. ငါ့ယောက်ျား.. ဘုန်းကြီးသမို့ .. ယောက်ျားကောင်းမောင်းမတထောင်ဆိုပြီး…( စိတ်ထဲက.) သဘောတူလက်ခံတာများ..များနေသလားလို့…။
မြန်မာပြည်က မယားပြိုင်ဥပဒေဆိုတာ အဆိုးချည်ပဲ မဟုတ်ပါဘူးသဂျီးရယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မယားငယ်ဖြစ်သွားသူတွေအတွက် အကာအကွယ်ပေးထားလို့ အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေပါတယ်။ လင်ယောက်ျားအဖိုးကြီးသေတဲ့အခါ ပစ္စည်းလက်မဲ့နဲ့ အိမ်ပေါ်က လက်လွတ်မဆင်းရအောင် အထူးသဖြင့် ဘာသာခြားနဲ့ယူတဲ့မိန်းခလေးများ တဖက်သက် အနိုင်ကျင့်မခံရအောင် စဉ်းစားပေးထားပါတယ်။ (ဦးနေဝင်း နောက်မိန်းမယူလို့ ဥပဒေထွက်တာလဲ ဟုတ်မှာပါ)
အသိတယောက်ပြောဖူးတယ်။ ပြည်ကြီးကလား ထိုင်ဝမ်ကလားမသိဘူး တရုတ်မတယောက် ယူအက်စ်က မုဆိုးဖိုတရုတ်ကြီးတယောက်နဲ့ အတူနေတယ်။ ဧည့်ခံပွဲတွေပါတွေလုပ်၊ တရားဝင်တွဲသွားတွဲလာရှိတယ်။ အဖိုးကြီးသေတော့ တရားဝင် လက်ထပ်ထားတဲ့ စာချုပ်စာတမ်း မရှိတော့ အိမ်ပေါ်က နှင်အချခံရတယ်။
သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ အဆစ်ပေးတာ ထုံးစံဖြစ်နေလို့ နေမှာပေ့ါ။ မန္တလေးမှာ ဈေးဝယ်ရင် ၁၀ခုဆိုရင် ၁ခု အဆစ်ရပြီးသား လိုမျိုးပေါ့။
(ဟုတ်မဟုတ်တော့ မန္တလေးသားတွေ သိမှာပါ။)
ကိုခိုင့်မိတ်ဆွေဂျပန်က ယူမယ်လဲမပြောသေးပဲ သူကိုယူမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ခေါ်လာတာကတော့တမျိုးကြီးပဲနော် ချွင်းချက်တွေဖြစ်မယ်နော။ အဲကမိန်းခလေးတိုင်းတော့ အဲလိုပြောမယ်မထင်ပါဘူး ။
တချို့များ တစ်လင်တစ်မယားတော် ပြဿနာအတော်ရှုပ်တာ
အများကြီးယူလို့ကတော့ ငါးပါးမကမှောက်ကုန်တော့မယ် (လူတိုင်းတော့ မဟုတ်)
မိန်းမတွေကိုကျတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲယူရမယ်ဆိုတာက မိန်းမက ကလေးမွေးရမှာလေ
ဥပမာ- ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရှိနေရင် မွေးတဲ့ကလေးက ဘယ်သူ့အဖေခေါ်မလဲ
အမွေကျတော့ ဘယ်အဖေကပေးလို့ ဘယ်အဖေ့ဆီကရမလဲမသိဘူး…
သူတုိ့တွေ တဏှာထလို့ တယောက်က နှစ်ယောက်ယူတာ အရေးမကြီးဘူး … ကြိုက်သလောက်ယူ ပတ်ဝန်းကျင်က အတင်းပြောယုံပဲရှိတာ … မြေစာပင်ဖြစ်ရတဲ့ ကလေးတွေရှိရင်သာ … ပဲလှော်ကြားက ဆားခဲလေးတွေ အဖြစ်နဲ့ စိတ်အားငယ် ၊ မျက်နှာငယ်ရတယ် … ။
ယောကျာင်္းတွေနဲ့ မိန်းမတွေ လိင်ကိစ္စအပေါ် ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာနဲ့ အိမ်ထောင်မှုကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီမှာ ခြားနားမှုကနေ ဒီလိုဒီလို ဖြစ်နေကြတာ။
မိန်းကလေးအများစုကတော့ ကိုယ့် ယောကျာင်္း (သို့) ချစ်သူ ဖောက်ပြန်နေတာကို
အားပေး အားမြှောက်လုပ်မယ့် အထဲမှာ မပါတာတော့ ကျိန်းသေတယ် ။
ကျန်တဲ့ လူနည်းစုကတော့ ဘယ်လို အကြောင်းအရာ အတွေးမျိုးနဲ့ လက်ခံတယ် အားပေးတယ်
ဆိုတာတော့ မပြောတက်ဘူး ။
အသွင်မတူတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုဖန်င်္တီးထားမိရင် မြန်မြန်အဆုံးသတ်နိုင်တာကောင်းတယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ် …
(နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာဖူးတဲ့အမြင်နဲ့ ပြည်တွင်းက အမြင် နဲနဲတော့ ကွာပါလိမ့်မယ်)